I-Dispensary Marketing ye-Intanethi ne-Search Engine Optimizaton
Ungaqinisekisa kanjani ukuthi ama-dollar akho wokumaketha aletha amakhasimende amasha.
Kunezindlela eziningi amabhizinisi amancane azikhangisayo ukuletha amakhasimende amasha afaka phakathi, umsakazo, i-TV, amabhodi okukhangisa, omagazini kanye nokukhangisa nge-dispensary internet. Inkinga abaphathi bezitolo ababhekana nayo ukuthi bangatshela kanjani ngokunembile ukuthi iyiphi indlela yokukhangisa esebenzayo. Ngaphandle kokuthi ubuze wonke amakhasimende amasha angena emnyango uzokwazi kanjani ukuthi iyiphi indlela ekulethela yona, amakhasimende amasha? Lolu lwazi lubalulekile ekukhuliseni ibhizinisi lakho ngoba livumela abaphathi ukuthi babele imali ethe xaxa kulokho okusebenzayo futhi bonge imali ezinhlelweni zokumaketha ezingasebenzi. Kuzo zonke izinketho ezaziwayo zokumaketha, iGoogle ukuphela kwayo enikeza idatha engenakuphikiswa enanini lamakhasimende athola ibhizinisi lakho ngokuseshwa kwe-inthanethi. I-Google inikezela ngokubalwa kwanyanga zonke kwenani ngqo lamakhasimende achofoza izinkomba eziya esitolo sakho ngenyanga. Lesi yisibonakaliso esihle sokuthi mangaki amakhasimende amasha i-Google ekuhlinzeka ngebhizinisi lakho futhi ikunikeza imethrikhi eqinile yokubala utshalomali lwakho lokumaketha uqhathanisa nenzuzo oyitholayo.
Ake sikukhombise isibonelo selinye lamakhasimende ethu okuyindawo yokuthokozisa insangu etholakala eTacoma Washington. Emfanekisweni ongezansi sinikeza isithombe-skrini lapho ikhasimende lisesha izikhungo eziseTacoma Washington bese likhetha i-Green Collar Cannabis. Ekhoneni eliphezulu kwesokudla kunenkinobho ethi izinkomba. Lapho nje ikhasimende lichofoza leyo nkinobho liyisa ebalazweni elibanikeza izinkomba ezivela endaweni yabo yamanje liqonde ngqo kubhizinisi lakho. Okungaziwa ngabaninimabhizinisi abaningi ukuthi iGoogle ilandelela NJALO isikhathi lapho ikhasimende lichofoza leyo nkinobho. Abagcini ngomkhondo wenombolo yabantu abachofoza leyo nkinobho kodwa bayalandelela LAPHO zitholakala. Le yimininingwane ebaluleke kakhulu engenakunikezwa nganoma iyiphi enye indlela yokumaketha.
Enye into ebalulekile okufanele uyiqonde ukuthi kuphela ikhasimende ELISHA elizochofoza kunkomba yokuqondisa ngoba amakhasimende amanje azokwazi ukuthi angalithola kanjani ibhizinisi lakho ezimweni eziningi. Inzuzo emaphakathi ngokuthengiswa ngakunye kwama-dispensaries icishe ibe ama-dollar ayi-8 ikhasimende ngalinye. Futhi ngiyakukhumbuza ukuthi lokhu kuphela uma ikhasimende lithenga kube kanye futhi lingabuyi futhi sazi kusuka kumamethrikhi amanje ukuthi izikhungo zokuzithokozisa zensangu zinezinga lokugcina cishe amaphesenti angama-60 kunani empeleni liphezulu kakhulu. Bona i-athikili yethu: Malini ikhasimende lomtholampilo elibiza malini.
Ngokuhlanganisa inani lamakhasimende athulwe kulokhu kuchithwa siza namakhasimende amasha ayi-1129 alethwe ngosesho lwe-Google lwaleli bhizinisi. Futhi khumbula ukuthi lokhu kwenzelwa iGoogle kuphela, akubandakanyi i-Bing nezinye izinjini zokusesha. Uma siphindaphinda u-1129 x * 8.00 sithola amaRandi ayizigidi ezingama-9,032 ngenzuzo ngenyanga. Manje lelo nani seliphezulu kakhulu ngoba akuwona wonke umuntu osesha ibhizinisi lakho ozochofoza inkinobho yezinkomba. Abanye bazofaka ikheli ngqo kuzinhlelo zabo zokuzulazula noma bathole izinkomba ezivela kuwebhusayithi yomuntu wesithathu. Iphuzu lalesi sihloko ukukhombisa ukuthi ukufaka imali ku-Search Engine Optimization kungenye yezindlela ezinengqondo kunazo zonke zokuqinisekisa ukugeleza kwamakhasimende amasha. I-Google ayigcini ngokukunikeza izinombolo kepha ikunikeza nezindawo lapho amakhasimende akho evela khona. Uma ubona indawo yedolobha lakho ofuna ukuyikhomba ungaba ne-SEO firm yakho engeza amagama angukhiye angeziwe ukuletha imali ethe xaxa. Amaphesenti angama-93 alo lonke usesho lwasendaweni oluku-Google futhi uma ibhizinisi lakho lingaveli ekhasini lokuqala wonke lawo makhasimende aya kwabancintisana nabo.
At Isenselogic.com izinhlelo zethu ze-SEO ziqala ngo- $ 500 ngenyanga futhi siqinisekisa umsebenzi wethu. Uma singakhuphuli inani lamakhasimende angena ngeminyango yakho aqinisekiswa nguwe nge-Google Console sizosebenza mahhala size okungenani sikuphindaphinde kabili ukubala kwamakhasimende akho angenayo. Xhumana nathi namuhla ukuthola ukucwaningwa kwamahhala kwe-SEO futhi sizokunikeza umbiko wokuncintisana wamahhala nokuhlaziywa kwamagama angukhiye webhizinisi lakho. Inani lama- $ 800 dollar.
Imiphumela yeklayenti lethu le-Google
Ngabe iLeafly neWedmaps ikhokhisa malini?
Amaqiniso E-Dispensary SEO